आकर्षक झोलुङ्गे पुलको जिल्ला पर्वत [यात्रा–संस्मरण] – Chitwan Post
हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल पार्नुपर्ने छ । यसवर्ष असंख्य विदेशी पाहुनाहरुलाई देश भिœयाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य पनि छ । सरकारले चालेको यो कदमलाई सफल बनाई विश्वमै सुन्दर देशको रुपमा रहेको नेपालको परिचय संसारभर पु¥याउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो । विदेशी पाहुनाहरुलाई स्वागत गरी सच्चा नेपालीको परिचय दिनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । यतिले मात्रै पुग्दैन, भ्रमण वर्ष सफल पार्न आन्तरिक पर्यटकहरुको मह¤व कम छैन । आन्तरिक पर्यटकहरु भनेका वास्तवमा देशका स्थायी पर्यटक पनि हुन् । हामीले आफूलाई व्यस्त र मस्त जिन्दगी बनाउन, अति व्यस्तताका बाबजुद ताजापनको अनुभव गर्न, अन्य स्थानमा भए गरेका अनुभवहरु लिन, अरुका राम्रा कुराहरुको प्रवद्र्धन र अनुकरण गर्न, देशका अधिकांश भूगोल र रमणीय सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरु हेर्नसमेत आन्तरिकरुपमा देशका विभिन्न भागहरुको भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायबाट समेत आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ताजापनको अनुभूति दिलाउन वर्षमा एकपटक भ्रमण गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याइएको छ । यो निकै सकारात्मक कदम पनि हो । यसरी सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकहरु सबै मिली आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्नु जरूरी छ । यसैक्रममा यस आलेखमा पर्वत जिल्ला र मुख्यतः कुस्मा भ्रमणको अनुभूति उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
२. पर्वत, कुस्मा यात्राको क्रममा
नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को उद्घाटन हुने दिन राष्ट्रपतिबाट भव्य समारोहका बीच कार्यक्रमको उद्घाटन हुँदै गर्दा अर्थात् पौष १६ गते (जनवरी १, २०२०) का दिन यो लेखकसहितको चार जनाको भ्रमण टोली पर्वत जिल्लाको कुस्मामा रहेका विभिन्न मनोरम प्राकृतिक छटाहरुको अवलोकनमा व्यस्त रहेको थियो । भ्रमणका अन्य उद्देश्यहरु जे भएता पनि एउटा अलग्गै उद्देश्य भनेको नेपाल भ्रमण वर्षको सुरूमा आन्तरिक पर्यटकको रुपमा नाम दर्ज गर्नुसमेत रहेको थियो । लेखकसहितको समूह पर्वत जिल्लाको कुस्मामा गई त्यहाँको वस्तुस्थिति, पर्यटकीयस्थलहरु, मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरु, पर्यटकहरुलाई देखाउनैपर्ने ठाउँहरु, त्यहाँको मुख्य विशेषता आदिका बारेमा स्थानीय विज्ञ व्यक्तित्वहरुसँग छलफलको क्रममा रहेको थियो र कुस्मा, पर्वतमा घुम्नैपर्ने स्थानहरुको भ्रमण गर्नुपर्ने मानसिकतासमेत राखेको थियो । यही सोंच र दृढ इच्छा परिपूर्ति गर्न यो समूह लागिपरेको थियो ।
आउजाउ गर्न केही समस्या भएता पनि अबको १ वर्षभित्रै पर्वत, कुस्मा पुग्नसमेत सहज हुने अवस्था देखिएको छ । खासगरी, पोखराबाट कुस्मा पुग्ने क्रममा समेत रमणीय पर्यटकीयस्थलहरुको अनुभव गर्दै जान सकिने रहेछ । पोखरादेखि नै सडक विस्तारको कार्यले सडकलाई केही तहसनहस बनाएको छ । पोखराबाट उकालो लाग्न थालेपछि सडक निर्माणको कार्यले यात्रा त्यति सहज नभएता पनि असहजतालाई प्राकृतिक दृश्य र मनोरम वातावरणले मन लोभ्याउने रहेछ । बाटोकै कारणले भ्रमण असफल त हुँदैन, तर बाटो विस्तारको क्रममा बीचबीचमा सडकका केही कार्यहरु सम्पन्न हुनेक्रममा पनि रहेकाले त्यति धेरै असहजताको अनुभव हुँदैन । तैपनि, पोखरादेखि कुस्मासम्मको यात्रामा देखिने मनोरम दृश्यहरु, प्राकृतिक सुन्दरता आदिको शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन । माछापुच्छ«े, धवलागिरि, अन्नपूर्णलगायत अन्य हिमालको सुन्दरतालाई नजिकैबाट नियाल्दै हिँड्दा स्वर्गमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । नाउँडाँडाको दृश्य, लुम्लेको सुन्दरता, सराङकोटको दृश्य, त्यहाँबाट देखिने सुन्दर पोखराको दृश्य, फेवाताल, बन्दै गरेको एयरपोर्टको दृश्य, उडिरहेका प्याराग्लाइडिङ र ससाना उडानहरु, विदेशी र स्वदेशी पाहुनाहरु रमाएको दृश्य, फोटो र भिडियो खिचिरहेको दृश्य, चिसो हावाको मन्द बहाव, आहा कति सुन्दर ! यस्ता परिस्थितिहरुलाई शब्दमा उतार्न मुस्किल हुन्छ । यस्तै दृश्यहरु हेर्दै र क्यामेरामा कैद गर्दै पोखराबाट ५७ किलोमिटरको यात्रापछि पर्वतको कुस्मा पुग्न सकिन्छ ।
३. यात्रा गर्नैपर्ने ठाउँ पर्वतको कुस्मा
विभिन्न मनोरम दृश्यहरुको स्वाद चाख्दै पर्वतको कुस्मा सदरमुकाममा पुग्न सकिन्छ । पर्वत जिल्लाको कुस्मामा यतिबेला सडक विस्तारले तीव्रता पाएको रहेछ । कुस्मा बजारको मुख्य सडक, हरेक गल्ली र टोलहरुमा सडक निर्माणका कारण त्यति धेरै यात्रा सहज नभएता पनि पर्यटकहरुलाई यस्ता समस्याले कुनै असर गर्दैन । एउटा सुन्दर उपत्यका भित्र रहेको कुस्मा बजार निकै सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ ।
पर्वत जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा रहेको एक पर्यटकीयस्थल हो । यो काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरपछिको चौँथो सानो जिल्ला हो । पहाडी क्षेत्रमा पर्ने यस जिल्लाको जम्मा क्षेत्रफल ४९४ वर्ग किमीमात्रै रहेको छ । यस जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदरसमेत नकारात्मक रहेको छ । २००१ को जनगणनाको प्रतिवेदनमा कुल १,५७,८२६ जनसंख्या रहेकोमा २०११ मा आइपुग्दा घटेर १,४६,५९० मात्र रहेको छ । तीमध्ये अधिकांश ब्राह्मण तथा क्षेत्री, केही मगर, केही गुरूङ तथा अन्य जनजातिहरुको बसोबास रहेको छ । मानवविकास सूचकांकमा समेत अब्बल रहेको यस जिल्लाको भौगोलिक बनावट नै स्वर्गीय र अनुपम रहेको छ । कुस्मा, मोदी, जलजला, पैँयु, बिहाडी, महाशिला र फलेवास यस जिल्लाका मुख्य पालिकाहरु हुन् । तीमध्ये कालीगण्डकी र मोदी नदीको वरपरमा रहेको कुस्मा यस जिल्लाको सदरमुकाम हो । कुस्मा पुग्न बाग्लुङबाट १२ किमी र पोखराबाट ५७ किमीमात्रै पर्दछ । कुस्माको पश्चिमतर्फ रहेको केबुलकार सेवाले पर्वत र बाग्लुङलाई जोड्छ भने यहाँ रहेका पुलहरुले समेत सहजता बनाएको छ । बाग्लुङको बलेवामा एयरपोर्टसमेत रहेको छ । तत्कालीन विभिन्न गाविस (पाङ, खुर्कोट, दुर्लुङ, शिवालय, चुवा, कटुवा चौपारी, पिपलटारी र पकुवा)लाई मिलाई कुस्मा नगरपालिका बनाइएको छ ।
४. पर्वतको कुस्माका प्रमुख आकर्षणहरु
पर्वत जिल्ला सुन्दर जिल्लाका रुपमा परिचित छ । धौलागिरि हिमालले चारवटा जिल्लाहरुलाई विभाजन गर्दछ– ती हुन्– पर्वत, बाग्लुङ, मुस्ताङ र म्याग्दी । त्यसो त अन्नपूर्ण, माछापुच्छ«े र धौलागिरि हिमाल नै पर्वत जिल्लाका आकर्षणसमेत हुन्, जसलाई नजिकबाट हेर्न सकिन्छ । यस जिल्लामा रहेका विभिन्न ऐतिहासिक तथा आधुनिक सभ्यताले जिल्लालाई थप परिचित बनाएका छन् । विभिन्न कारणले ओझेलमा रहेका स्थानहरुको अझै प्रचारप्रसार हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । यति सुन्दर प्राकृतिक छटाहरुले सुसज्जित पर्वत जिल्लाको कुस्मामा रहेका प्रमुख आकर्षणहरु यसप्रकार छन् :
— गुप्तेश्वर गुफा
परम्परामा यस गुफालाई भालुदुलो भनिन्थ्यो भने पछि यसलाई गुप्तेश्वर गुफा भन्न थालियो । यो देशकै प्रमुख आकर्षणको रुपमा रहेको गुफा हो र देशको सबैभन्दा लामो गुफा पनि हो ।
— नेपालका सबैभन्दा अग्ला र लामा झोलुङ्गे पुलहरु
कुस्मामा रहेका विभिन्न पुलहरुले विभिन्न रेकर्ड तोडेका छन् । मुख्य पुलहरु कालीगण्डकी र मोदी नदीमा रहेका छन् । नेपालको सबैभन्दा लामो प्रथम, दोस्रो, तेस्रो पुल र सबैभन्दा अग्लो पुल कुस्मामै नजिक नजिक रहेका छन् । कुस्मा पुल, फलेवास पुल, ग्यादी पुल र कैया पुल सबैभन्दा आकर्षक पुलहरु हुन् । तीमध्ये २०१५ सम्ममा सबैभन्दा लामो ग्यादी पुल ३४४ मिटर रहेको थियो भने यो पुल नै सबैभन्दा अग्लो रेकर्ड ११७ मिटर कायम भएको थियो, जुन मोदी नदीमा रहेको छ । यसैगरी, कैया पुल ३४७ मिटर लामो र १५६ मिटर अग्लोमा रहेको छ, जुन कालीगण्डकी नदीमा रहेको छ । त्यस्तै, मुडिकुवा पुल ३५९ मिटर लामो र १५५.७ मिटर अग्लो रहेको छ, जुन मोदी खोलामा रहेको छ । यान्त्रिक पुल ५६० मिटर लामो र २९४ मिटर अग्लो छ, जुन कालीगण्डकी नदीमा रहेको छ । यसका अलावा कुस्मामा अन्य पुलहरु समेत धमाधम बन्ने क्रममा रहेका छन्, जुन थप आकर्षक हुनेछन् ।
— पाथेश्वरी मन्दिर
कटुवा चौपारीमा रहेको यो मन्दिर पनि पर्वतको आकर्षण हो ।
— केबुल कार
बाग्लुङ र पर्वत जिल्लालाई जोड्ने केबुल कार पनि कुस्मामा रहेको छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणले योसमेत आकर्षण रहेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानबाट बन्जीजम्प गर्ने संरचनासमेत पर्वतमा कालीगण्डकी नदीमाथि तयार भैसकेको छ । यो २२८ मिटर अग्लो र ५२५ मिटर लामो पुलमाथि रहेकोले यसले विभिन्न रेकर्डहरु तोड्नेछ । कुस्माको अर्को आकर्षण यो बन्जीजम्प अब उद्घाटनको क्रममा रहेको छ । त्यसैमा स्काई साइक्लिङसमेत सञ्चालन हुँदैछ, जसले थप आकर्षण थप्ने सुनिश्चित छ । त्यसको नजिकै पिङ खेल्ने सुविधासमेत रहेको छ, जुनसमेत निकै आकर्षक रहेको पाइन्छ ।
— सुविधासम्पन्न होटल
जिल्लामा पर्यटकका लागिसमेत लक्षित गरी विभिन्न सुविधायुक्त होटलहरु रहेका छन् । तीमध्ये कुस्मामा होटल माउन्टेन भ्यू हालै निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ, जुन निकै सुविधासम्पन्न रहेको छ । लिफ्टसहितको यस होटलमा हरेक सुविधाहरु रहेका छन् । कुस्माकै भ्यू–टावरका रुपमा रहेको यस होटलमा युरोपियन प्रविधिको प्रयोग भएको छ ।
पर्वत जिल्ला अस्पताल : स्थापित हुँदै र तंग्रिने अवस्थामा
पर्वत जिल्लामा रहेको एकमात्र १५ बेडको सरकारी अस्पताल हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । विगतमा निकै अस्तव्यस्त रहेको र सामान्य स्वास्थ्य सुविधासमेत जनताले प्राप्त गर्न नसकेको यो अस्पताल विगत डेढ वर्षदेखि अस्पताल व्यवस्थापनमा गोविन्द पहाडीको अध्यक्षतामा समिति बनेपछि स्थापित हुँदै गइरहेको बुझ्न सकिन्छ । करोडौँ रूपैयाँमा अस्पतालका भवनहरु बन्ने क्रम र आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ हुँदै गइरहेकोले यस अस्पतालले समेत भरोसायोग्य सेवा दिने आशा गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको सक्रियतामा स्वदेश र विदेशबाट सहयोग प्राप्त गरी तंग्रिने अवस्थामा रहेको यो अस्पताललाई देशकै नमुना अस्पताल बनाउने प्रण अध्यक्ष पहाडीले गरेका छन् । उनको सक्रियता र लोकप्रियतालाई समेत स्थानीय बासिन्दाहरुले खुलेरै प्रशंसा गर्नुले अस्पताल नमुना बन्न सक्ने देखिन्छ ।
पर्वत जिल्ला नेपाल भ्रमण वर्षका लागि उचित गन्तव्य बन्न सक्नेमा कुनै शंका छैन । आवतजावतका लागि यसवर्षको अन्तसम्ममा सहज हुनसक्ला, तर हाल निर्माणाधीन सडकका कारण केही असहजता भएता पनि यात्राको क्रममा कुनै दुःखको अनुभूति हुँदैन । यात्राका क्रममा सुन्दरता र प्राकृतिक उपहारहरुले नै आँखा झिम्म पार्न नदिने परिस्थिति सृजना हुने गर्छ । एकपटक अवश्य पर्वत जिल्ला र खासगरी कुस्माको भ्रमण गरौँ, आन्तरिक पर्यटन सुदृढ गर्दै बाह्य पर्यटकलाई समेत आकर्षित गरौँ ।